Uchishandisa VIM: Basic Tutorial. | Kubva kuLinux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Applications, GNU / Linux, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Handina kumbofunga kuti ndaizotaura izvi, asi ndiri kufarira zvisingaite mupepeti wekunze uko kune iyo terminal mukati GNU / Linux: VIM.
Vim (wepa English Ndakaona Yakabvumidzwa) ishanduro yakavandudzwa yeiyo zvinyorwa zvemavara vi, iripo mumasisitimu ese UNIX.
Munyori waro, Bram Moolenaar, yakaratidza yekutanga vhezheni mu 1991, musi wawakagadziriswa zvakawanda. Chinhu chikuru chevaviri Vim neVi ndechekuti vane nzira dzakasiyana dzinogona kushandurwa pakati kuti vaite mamwe mashandiro, ayo anovasiyanisa kubva kune vakajairika edhita, ayo anongova nemhando imwe chete umo mirairo inopindirwa uchishandisa musanganiswa wakakosha kana graphical interfaces.
Ini ndiri mumwe weavo vaifunga kuti uyu anga ari mupepeti we "octopus" kana vanhu vane zvinopfuura gumi zvigunwe, nekuti chokwadi chiri nyore chekuve nekuwanda kwakawanda mabhatani kwakaita kuti ndifunge kuti VIM yaive "monster" yevanonyaradza editors. Chokwadi ndechekuti kubvira nezuro ndanga ndichidzidza kuishandisa (kunyangwe nezvinhu zvakakosha kwazvo) asi ndiri kujaira izvozvo, uye zvakaipisisa (kana zvakanakisa zvese) ndezvekuti ndiri kuzvifarira zvakanyanya.
Ini ndagara ndakagadzikana nekushanda kwe nano, asi ichokwadi kuti mupepeti uyu anonyanya kukosha. Kana isu tiine graphical nharaunda, iyo inotora inogona kushandiswa kuteedzera / kunama, asi kana isu tiri mune TTY zvinhu zvinoshanduka. Ndiwo mukana wekutanga wandinowana VIM. Zvimwe zvinhu zvandiri kuda ndeizvi:
Kusarudzwa kwemavara mumakoramu.
Kujekesa kwemabhureki, mabhureki uye mabhureki (kuita kuti ive yakanaka pakuronga).
Yakanyanya kusimba, kunyangwe iyo faira ratiri kugadzirisa rikakanganiswa, rinotibvumidza kuti riitorezve gare gare.
Pano unogona kuona zvakawanda ...
Iyo chete yemavara edhitaina muoni (yeavo vandinoziva) izvo "zvinosvika" ku VIM es MCEedit, MC chinyorwa chinyorwa. Asi cherekedza zvakatorwa mumutsara uri pamusoro. VIM kunyange ine GTK mupepeti. Asi zano reichi positi harisi rekukutengesa kana kukurudzira kuti vashandise VIM, inongova nzira yekuudza iwe kuti iri nyore kushandisa pane zvayinoita chaizvo.
Yekutanga dzidziso pakushandisa VIM
Ini ndanga ndichifunga kukusiya yakateedzana mapfupi e keyboard, asi ndinofunga zvingave zvinonyanya kushanda kana ndikakuratidza mashandiro ayo kuburikidza nemuenzaniso. Chinhu chekutanga chatichaita kuisa VIM kana isu tisati tatozviita, kana kana zvikasauya nekukanganisa mukugovera kwedu kwatinoda. Pane imwe chete yaiswa, tinozarura sarudzo uye tinoisa:
Tichaona chimwe chinhu chakadai.
Iye zvino tinodzvanya kiyi I kana kiyi Insert kuchinja kubva kuraira modhi kugadzirisa modhi uye kutanga kutaipa. Tinonyora chero chinhu, kana zvichibvira, icho chine mitsetse inodarika miviri. Ini semuenzaniso ndakaisa:
Zvino, tinodzvanya kiyi ESC kuti ubudise edit mode, enda kune kutanga kwegwaro nemiseve yekhibhodi uye wadzvanya kiyi V. Iwe uchaona izvo pazasi zvinoti izvozvi KUVANYA. Nemuseve wezasi tinomaka ese mavara atinonyora. Kana tasarudza zvese, tinodzvanya kiyi Y. Kana izvi zvaitwa, iwe uchaona kuti pazasi inoratidza huwandu hwemitsetse yakateedzerwa.
Iye zvino tinofamba zvishoma pasi uye tinya kiyi P. Nguva imwe neimwe yatinodzvanya, iwo mavara akafanana anonamirwa. Kana panzvimbo yekiyi Y tinodzvanya kiyi X, iwo mavara atakasarudza achadimburwa. Tinogona kuinamatira zvakare nekiyi P.
Iye zvino tava kuzochengetedza gwaro rekuyedza. Tinodzvanya ESC kana isu tiri mune yekugadzirisa maitiro uye isu tinonyora :w, kureva, mapoinzi maviri uye a W. Izvi zvinoita kunyora kana kuponesa zvatiri kuita. Kana tikazonyora gare gare :q isu tichabuda mupepeti. Kana izvo zvatinoda kusevha nekuvhara, tinonyora 😡.
Zvino imwe yekupedzisira hunyengeri. Ngatitii iyo terminal yakavharwa netsaona uye isu tinorasikirwa negwaro. Izvo zvatinofanirwa kuita kunyora zvakare:
uye isu tichawana chimwe chakadai.
Kana iwe ukatarisa kumagumo isu tine akateedzana sarudzo. Mune ino kesi tinodzvanya kiyi R kutora gwaro rapfuura, ipapo rinotikumbira kudhinda ENTER Uye voila, tinogona kuenderera kwatakasiya. Zvino, kana nemukana tikarova kiyi E (gadzirisa zvakadaro) isu tinogona zvakare kutora gwaro nekutaipa : kupora, uye isu tichawana chimwe chakadai.
Mune ino kesi yangu sarudzo ndeyekunyora iyo nhamba 1 uye voila, basa redu rinowanikwa zvakare.
Kana iwe uchida kushandisa VIM nyore, ipapo unogona kuisa GVIM, iyo yakafanana uchishandisa Gtk maraibhurari ekushandisa maMenus uye dzimwe sarudzo dzinofambisa basa remushandisi.
Iko kune kutowedzerwa kwe Firefox kudana Vimperator, izvo zvinotibvumidza isu kubata iyo browser sekunge VIM zvichave 😀
Uye kusvika pano Howto, chero zano kana ruzivo rwunogamuchirwa kuti isu tese tigoziva zvimwe zvinhu zvinobatsira nezve VIM.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Uchishandisa VIM: Basic Tutorial.
Ini ndaizoshandisa Gvim, kunyangwe ini ndisina kuona syntax ichisimbisa uye zvingave zvakanaka kana iwe ukaisa mifananidzo yechimwe chinyorwa muHTML kuti uone kuti zvese izvo zvii. Ndiri kuenda kuzoshanda naVim uyezve ini ndoita imwe yeaya akadzika ongororo sezvandakaita neGedit… ndipei vhiki uye ndinayo.
Kana iwe uchida kuona kuti syntax inosimbisa inoshanda sei ini ndinokusiira iwe yakati wandei mienzaniso.
Uye mu link iripazasi pezvirongwa zvakawanda kuti zviwedzere kufadza. xP
Yakanaka kwazvo iyo vim dzidziso, tinotarisira kuti imwe ichaitwa gare gare, kumberi kumberi kana zvimwe zvinyengeri, izvo zvinogona kuitwa nechishandiso ichi;),
kwenguva yekupinda munyika ino ye vim izvozvi
Parizvino ndakabatirirwa nema emac, ayo achangobva kundibata zvakanyanya, kune rimwe divi vim zvinoita kuti zvindiomere chaizvo kufamba pakati pezvinyorwa.
PS: Makorokoto! Ivo vekutanga vari muchinzvimbo.
Isu varume tinoshandisa maEmac, munoziva!
Pandakatanga kuverenga "Handina kumbofunga kuti ndaizotaura izvi, asi ndiri kufarira zvinoshamisa mupepeti weiyo terminal paGNU / Linux ..." ndakafunga: zvakanaka, akawana maEmac!
Panzvimbo pezvo zvinobva zvaratidza kuti mukomana anoenda kunze nequeer - zvinhu izvo munhu anowana pamambure!
Ohh macho iwayo. Ini ndinofungidzira wobva washandisa LFS, nekuti kushandisa distro nezvose zvakatsengwa ndinofungidzira kuti zvakare fagot handiti?
Man emacs anoita kwandiri zviri nyore kupfuura vim asi neruvara rwevaravara.
vimtutor yakanaka kwazvo yekudyidzana dzidziso, iyo yakagadzirirwa kupedzwa mumaminetsi makumi maviri neshanu. yakakurudzirwa!
Pindura kuna Dav
Chokwadi icho chinondishandira, ndinofanira kushanda pane icho
Ehe, chaizvo Vimtutor yakanaka ...
Tamba mutambo uyu uye ndipo pausingaregi kushandisa vim uye uchadzidza kuushandisa neupenzi, chaizvo, iwe ucharovedza zvakawanda nemutambo uyu zvinhu zvakakosha nezvevim sekuziva kufamba zvakanyanya.
Pindura ku wheezy
Ini handisi mugadziri, saka izvo zvandinofanira kuita: kugadzirisa .conf kana kuisa maoko angu mupkbuild nguva nenguva, neNANO inondikwanira uye ndine zvakawanda. Pane imwe nguva yekuyedza ndakavhura faira muVIM uye ini ndanga ndisingatozive mabudiro ebva imomo.
Yakanaka yakakosha kune avo vanotanga ne vim, kunyangwe ini ndaifunga kuti yaive chikara asi senge zvese, inongova nyaya yekujairira. xP
Ndinosiya zvirongwa zvakawanda kune avo vanoda kuedza.
@elav, ndinokusiira vimrc yangu kuti ugone kushandisa imwe config inoshanda kwauri
Ndiri kutora kuravira kweakanakisa mupepeti uyo aripo weiyo terminal muGNU / Linux
Iwe unoda kukonzera marimi, huh? Iyi ndiyo pamwe ndiyo murazvo wekare oldest
PS: VI Matombo!
Yakanaka dzidziso! maita basa kwazvo 😀
inonakidza kwazvo: 3
Pindura kune esme
Chinhu chakakosha chinogara chiri chakanaka.
Rene, anobva kuMexico, anogona. akadaro
Izvo zvakanaka kuti uzive zvishoma nezve zvese, kana rimwe zuva uchizozvida, Murume akachenjera anogara achikoshesa chibairo cheumwe wake.
Pindura kuna Rene, anobva kuMexico, anogona.
Yakanaka dzidziso asi ini ndiri mutsva kune izvi uye handizive maitiro ekuwedzera brigthscript mupepeti kune gvim https://github.com/chooh/brightscript.vim.git Unogona kundibatsira here